Mitambo nemashandisirwo emahara kwenguva yakati wandei (Zvita 8) | IPhone nhau
Kukunda hangover paKisimusi uye paZuva reKisimusi, ndinodzoka nebatch nyowani ye mitambo uye kunyorera izvo, kunyangwe zvichinyanyo kubhadharwa, nhasi unogona kuzviwana muApp Store mahara.
Rangarira kuti uku kukwidziridzwa kuri Nguva Yakatemwa uye kuti hatizive kuti vachashanda kwenguva yakareba sei. Chinhu chega chatinogona kuvimbisa ndechekuti izvo zvidzikiso zviri kushanda panguva yekutsikisa ichi posvo, saka chinhu chakanakisa ndechekumhanyisa kuti ubate mitambo nemashandisirwo anokufadza zvakanyanya, uye gare gare uchave uine nguva kuti uvaongorore.
1 Baldify - Enda Bald
4 A To Z Monsters: Alphabet Kudzidza Kwe Kindergarten HD
5 Blox 3D Nyika Musiki
6 Blox 3D Guta Musiki
7 Anim8: 3D Hunhu Hwakasikwa Hwakagadzirwa Nyore
Baldify - Enda Bald
Baldify - Enda Bald iko kushandiswa kwekushandisa kushoma, asi izvo zvinogona kudaro zvinosetsa kwazvo pakuungana kwemhuri neshamwari zvakajairika mumazuva aya. Uye uchifunga kuti izvozvi unogona kuzviwana mahara, hapana chekurasa. With Baldify Unogona "tunearte" kuva nemhanza murume ane hombe masharubu nezvimwe zvakawanda.
Mutengo wadzo wenguva dzose ndi0,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuzviwana mahara zvachose.
Republique inozivikanwa uye ine mukurumbira mutambo unobva pamapuzzle uye zano izvo zvinokuvaraidza kwemaawa, uye maawa nemaawa.
Mu "Chikamu 5: Terminus", yechishanu uye yekupedzisira chikamu cheinonakidza République saga, mativi acho anotsanangurwa. Tariro uye mutambi anotora kurwira rusununguko akananga kune Vese
Mutengo wadzo wenguva dzose ndi2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuzviwana mahara zvachose.
«Blox 3D iri inonakidza uye yakapusa nzira yevana yekudzidza 3D modelling. Gadzira zvinhu zvakakosha nenzira yakapfava uye isinganzwisisike uchishandisa kiyi uye kaviri pombi kuti ubvise.Wedzera zvinhu zvine hupenyu kunge magiya, zvinofambisa uye mavhiri kuti zviite vapenyu.Blox 3D yakagadzirirwa kusimudzira kugona kwevana uye kugona kuona.
A To Z Monsters: Alphabet Kudzidza Kwe Kindergarten HD
A kusvika kuZ Monsters iapp - mutambo uyo inodzidzisa vana alfabheti kuburikidza ne "madhimoni anopenga".
Tarisa boka rezvikara rinokudzidzisa mavara. Nhanho yekutanga ndeyekusunungura ivo uye kuvatarisa vachipenga. Anobva avatora. Aya madhimoni anopenga anonakidza uye anovaraidza, achichengeta mudzidzi mudiki achibatikana uye achifarira kudzidza mavara. Wagadzirira here kusangana naVaClone, VaHasha, VaBhombu pamwe nemamwe makumi maviri emhuka dzakapenga?
Mutengo wadzo wenguva dzose ndi1,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuzviwana mahara zvachose.
Blox 3D Nyika Musiki
Uyu mutambo unobvumira vana, uye zvakare vakuru, kuvaka nyika dzakagadzirwa zvachose kubva ku3D block nokudaro zvichimutsa kugona kwavo uye fungidziro.
Blox 3D Guta Musiki
Blox 3D Guta Musiki musiyano wemutambo wekare unobvumidza gadzira 'anoshamisa maguta nezvivakwa, mota, migwagwa nevanhu. Iwe unogona kuwedzera zvivakwa, migwagwa, migwagwa, ese marudzi emota senge mota, marori, zviito, uye kupa rako guta hupenyu.
Anim8: 3D Hunhu Hwakasikwa Hwakagadzirwa Nyore
Zvinotaridza kuti nhasi izuva repasi rose re3D nekuti heino chimwe chikumbiro nemaitiro aya atinogona kuwana emahara kwenguva yakati rebei.
Anim8 inobvumira vanotanga uye vafambi gadzira 3D hunhu hunhu mune inonakidza uye inonzwisisika nzira.
Kubva kumusiki mumwechete weBlobx 3D, Blox 3D Nyika Musiki uye Blox 3D Gadzira Musiki, Blox 3D Junior «Inonakidza uye yakapusa nzira yeku ita kuti vana vavake zvinhu mu 3D. » Vanogona kugadzira zvinhu zvakanaka nenzira yakapusa uye inonzwisisika, nekubata kamwe chete, kana maviri ekubata kudzima, kuwedzera zvitambi, nezvimwe zvakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 8 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Zvita 26)
Adrian nava akadaro
Republique haina mahara
Pindura Adrian Nava
Republique, mutambo wakazara hauna mahara, chitsauko chekutanga chete
Julio Urízar akadaro
Blox 3D Izvi hazvisi zvemahara, zvinotengwa pa $ 2.99
Pindura kuna Julio Urízar
Musoro wepositi unoti "kwenguva shoma", uye mune imwecheteyo positi zvakatoonekwa kuti izvi zvinopihwa zvinoonekwa kamwe kamwe uye hazvizivikanwe kana zvapera. Dzimwe nguva dzinogara kwemazuva, uye dzimwe nguva maawa chete. Izvo zviri kune vanogadzira. Chinangwa changu ndechekuti iwe utore mukana wekubvisa sezvandinoita, asi unofanirwa kukurumidza hehe.
Splot, yemahara kwenguva shoma